မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ - ဝီကီပီးဒီးယား
မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါကို ကြမ်းတမ်းသော မျက်ခွံအတွင်းသားရောင်ရမ်းနာ ၊ အီဂျစ်လူမျိုး မျက်လုံးရောင်ရမ်းနာ နှင့် အမြင်အာရုံကွယ်စေသော မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ၎င်းမှာ Chlamydia trachomatis (English) ဟုခေါ်သော ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ပွားသော ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤကူးစက်ရောဂါသည် မျက်ခွံအတွင်းလွှာရှိ ဂရမ်နူလေးရှင်းတစ်ရှူးဟုခေါ်သော မျက်နှာပြင်ကို ကြမ်းတမ်းစေသည်။ ဤသို့မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းလာသောကြောင့် မျက်လုံးနာခြင်း၊ မျက်ကြည်လွှာ ပျက်စီးခြင်းနှင့် အမြင်အာရုဏ်ကွယ်ခြင်းတို့ပါ ဖြစ်နိုင်သည်။
In-turned eyelid and eyelashes asaresult of trachoma
၂ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်း
၃ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း၊ ကူးစက် ပျံ့ပွားမှု နှင့် ရောဂါသမိုင်း
မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါဖြစ်နေသူ၏ မျက်လုံးနှင့် နှာခေါင်းကို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ထိတွေ့ပါက မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်သည်။ သွယ်ဝိုက်၍ထိတွေ့ခြင်းဆိုသည်မှာ မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါဖြစ်နေသူ၏ မျက်လုံးနှင့် နှာခေါင်းကို ထိတွေ့ထားသော အဝတ် သို့မဟုတ် ယင်ကောင်မှတဆင့် ကူးစက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရောဂါကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားရနေသူသည် မျက်ခွံတွင် အမာရွတ်ဖြစ်လာပြီး မျက်တောင်မွှေးများ မျက်လုံးကို ပွတ်တိုက်တတ်သည်။ ဤရောဂါသည် လူကြီးများထက် ကလေးများတွင် ပို၍ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ မိလ္လာနှင့်ရေဆိုးစနစ်စီမံမှု ကောင်းစွာမရှိခြင်း၊ ပြည့်ကျပ်စွာ နေထိုင်ခြင်းနှင့် မသန့်ရှင်းသော ရေနှင့် အိမ်သာများ အသုံးပြုခြင်းမှလည်း ရောဂါကူးစက်နိုင်သည်။
သန့်ရှင်းသော ရေကို ပေးဝေခြင်းဖြင့် ဤရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ရောဂါခံစားနေရသူများကို ပဋိဇီဝဆေး တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်သည်။  ရောဂါကုသရာတွင် ရောဂါဖြစ်လေ့ရှိသော လူများအားလုံးကို တပြိုင်နက်ကုသရမည်။ ရေဖြင့် သန့်ရှင်းအောင် ဆေးကြောခြင်းတစ်မျိုးထဲဖြင့် ဤရောဂါကို မကာကွယ်နိုင်သော်လည်း အခြားရောဂါကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့် အတူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သည်။ အဇီသရိုမိုင်စင်သောက်ဆေး သို့မဟုတ် တက်ထရာစိုင်ကလင်းလိမ်းဆေးဖြင့် ကုသနိုင်သည်။ အဇီသရိုမိုင်စင်သည် တစ်ကြိမ်သာ သောက်သုံးရန်လိုအပ်သဖြင့် ရောဂါကုသရာတွင် ပိုအသုံးဝင်သည်။  အကယ်၍ မျက်ခွံပေါ်တွင် အမာရွတ်ပေါ်လာပါက မျက်တောင်မွှေးများ နေရာမှန်ရောက်အောင် ခွဲစိက်ကုသခြင်းဖြင့် အမြင်အာရုဏ်ကွယ်ခြင်းမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်သည်။
ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း၊ ကူးစက် ပျံ့ပွားမှု နှင့် ရောဂါသမိုင်းပြင်ဆင်
ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ဤရောဂါဖြစ်ပွားသူများ သန်းပေါင်း ၈၀ခန့်ရှိသည်။ တချို့နေရာများတွင် ကလေးပေါင်း ၆၀-၉၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဤရောဂါဖြစ်ပွားနေပြီး အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက ကလေးများနှင့် ပို၍ထိတွေ့မှုရှိသောကြောင့် ပို၍အဖြစ်များသည်။ လူပေါင်း ၂.၂ သန်းခန့်မှာ ဤရောဂါကြောင့် အမြင်အာရုဏ် ချို့ယွင်းနေပြီး လူပေါင်း ၁.၂ သန်းခန့်မှာ လုံးဝ အမြင်အာရုဏ်ကွယ်သွားကြသည်။ ဤရောဂါသည် အာဖရိကတိုက်၊ အာရှတိုက်၊ အမေရိကတိုက် အလယ်နှင့် တောင်ပိုင်းတို့ရှိ နိုင်ငံပေါင်း ၅၃ နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေပြီး လူပေါင်း သန်း၂၃၀မှာ ဤရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဤရောဂါကြောင့် အမေရိကနိုင်ငံတွင် တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈သန်းခန့် ကုန်ဆုံးနေသည်။  ဤရောဂါသည် လျှစ်လျူရှူခံထားရသော အပူပိုင်းဒေသရှိ ရောဂါများ ဟုခေါ်သော ရောဂါအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။
↑ Swanner၊ Yann A. Meunier ; with contributions from Michael Hole, Takudzwa Shumba & B.J. (2014)။ Tropical diseases :apractical guide for medical practitioners and students။ Oxford: Oxford University Press, USA။ p. 199။ ISBN 9780199997909။
↑ ၂.၀၀ ၂.၀၁ ၂.၀၂ ၂.၀၃ ၂.၀၄ ၂.၀၅ ၂.၀၆ ၂.၀၇ ၂.၀၈ ၂.၀၉ ၂.၁၀ ၂.၁၁ ၂.၁၂ Blinding Trachoma Fact sheet N°382။ World Health Organization (November 2013)။ 14 March 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Evans JR1, Solomon AW (March 2011). "Antibiotics for trachoma". Cochrane Database Syst Rev 16 (3): CD001860. doi:10.1002/14651858.CD001860.pub3. PMID 21412875.
↑ Ejere, HO (Apr 18, 2012). "Face washing promotion for preventing active trachoma.". The Cochrane database of systematic reviews 4: CD003659. doi:10.1002/14651858.CD003659.pub3. PMID 22513915.
↑ Mariotti SP (November 2004). "New steps toward eliminating blinding trachoma". N. Engl. J. Med. 351 (19): 2004–7. doi:10.1056/NEJMe048205. PMID 15525727.
↑ ၆.၀ ၆.၁ Fenwick, A (Mar 2012). "The global burden of neglected tropical diseases.". Public health 126 (3): 233–6. doi:10.1016/j.puhe.2011.11.015. PMID 22325616.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မျက်ခမ်းစပ်ရောဂါ&oldid=342338" မှ ရယူရန်
၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၀:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၀:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။